Juni 12, 1942 intombazanyana yamaJuda okuthiwa Anneliz UMari Frank wenza irekhodi lakhe lokuqala idayari manje edumile, okuyinto wanika njengoba lokuzalwa. Wayengazi ukuthi yini isizukulwane esizayo siyakulandiswa fundani futhi nixoxe yakhe yezenzakalo zansuku zonke, futhi ngokusebenzisa amanothi yakhe kuyoba uphawu ongenakulibaleka nhlekelele ukuQothulwa Kwesizwe izigidi abafundi emhlabeni wonke.
Life endaweni yokukhosela: Ukuqaphelwa
-Anne Frank engu-16 kuphela lapho yena wabulawa ekamu amaNazi eBergen-Belsen. Ngaphambi ukuthi ayecashe nomkhaya wakhe namanye amaJuda ezine-Dutch kusukela amaNazi (phakathi 1942 no-1944) iminyaka emibili. Isikhoselo sabo abe elisophahleni imfihlo, bafihliwe sezakhiwo ehhovisi e-Amsterdam, lapho azi ukuthi kukhona abantu abambalwa ekusizeni Frank umndeni.
Sonke leso sikhathi, u-Anne eqoshiwe imicabango yakhe ejulile futhi kugcinwa kabuhlungu nangobuqotho achterhuis - «ephephile», njengoba waqamba umuzi wakhe ngasese. Lezi kwedayari kubonise ukungezwani futhi ingozi ukuthi ebhekene umndeni wakhe kanye nabantu amsiza. Kodwa kungabonakala nakulokho ukukhohliseka kwasebusheni nomlobi Cabangisisa. Anna hhayi kuphela bodokotela ezimpilweni zansuku kwabantu abayisishiyagalombili baphoqeleka ukuba ziphile ezimweni enyinyekile, ukufihla, besabela ukuthi ngandlela-nganoma isiphi isikhathi bakuthola. Le ncwadi yezenzakalo libuye lichaze zikhathi ngimnene, amahlaya okuhle, ngisho nalapho bebhekene ngokoqobo esabekayo.
Izifundo kusukela idayari futhi ukusabela baxgeki ukuze yanyatheliswa
"U-Anne Frank: Diary of intombazanyana," esanyatheliswa Holland ngo-1947, futhi neyesiNgisi balandela e-United States ngo-1952, ngokuvumelana 'Indlu-Anne Frank. " Ngemva kokukhishwa kukamagazini i yencwadi e-United States ngaleso sikhathi kwathiwa indaba "zakudala ', futhi obuseduze kakhulu inhliziyo, ngokusho kocwaningo ishicilelwe ngonyaka ofanayo, New York Times.
U-Anny Frank idayari ugcwele umusa nokuvuleka, ngokuvumelana iThe Times ngoLwesine. Nakuba-ke futhi wathola izikhathi nokucasula nenzondo okwenzekayo, kodwa le mizwa akhanya ngakho futhi eduze umfundi, ukuthi ezimweni eziningi, kukhona jikelele kakhulu nemvelo. Abantu ababeka uchaza Anna, kubonakale eduze umfundi, ngoba bangaphila ngisho nabo endaweni. Imizwelo abusa ngaphakathi nomndeni wentombazane, ukungezwani kwabo nokwesabeka umuntu enezimfanelo ezingavela kunoma yimuphi umuntu ngisho nesimo esinzima kangaka.
Ngisho nalabo abafundi lokuqala idayari-Anne Frank babekwazi ukubona amandla eliyingqayizivele izwi lakhe, futhi cishe okusolakala ukuthi maduze ungakhohlwa ngakho, ngokusho kocwaningo Times.
"Yiqiniso, abaningi ngeke bathande yakhe yezenzakalo zansuku zonke, njengoba lokhu abasha intombazane abahlakaniphile nabafundisi enhle ibuyisela inkolelo infinity womuntu umoya», - Times ubhala.
Ngempela, esekelwe ukuthandwa incwadi yakhe, okuyinto laqhubeka lenyuka nge Unyaka ngamunye odlulayo, singasho ukuthi Anna abathandwa abafundi abaningi. Ngo-1969, idayari yakhe ibilokhu inyatheliswa ngezilimi ezingu-34, futhi okwamanje litholakala 70 Uma sicabanga ukuthi kwathengwa amakhophi angaphezu kwezigidi ezingu-25 "The Diary of Anne Frank" kwaba enye yezincwadi kabanzi wokufundwayo emhlabeni.
Izwi kwaphakade nezingane zazishiswa
Esinye sezici emangalisayo yencwadi luba nomthelela okungaguquguquki umfundi. "The Diary of Anne uyaqhubeka ukuthonya abafundi emhlabeni wonke, ngokwengxenye ngenxa yokuthi indaba yayo othakazelisayo siqu futhi kunikeza umbono walokho isikhathi emnyama kakhulu emlandweni wesintu", - uthi u-Edna Friedberg, isazi-mlando e-Institute of Education e-Kwesizwe Memorial Museum e-US.
Ezigidini eziningi zentsha-Anne Frank futhi yakhe yezenzakalo zansuku zonke kukhona iphuzu lokuqala ukungena zwe eliyinkimbinkimbi Kwesizwe, ngokuyinhloko ngenxa izwi intombazane.
Yena zihlakaniphile futhi ebucayi, kodwa futhi ngempela. -Anne Frank isibe izwi ezingaphezu kuka-1 million izingane angamaJuda Kwabulawa phakathi nokuQothulwa Kwesizwe, kodwa futhi wakwazi kulezikhathi izenzakalo sibonga idayari yayo.
Njengoba idayari eyeve eshumini nambili, le ncwadi ibilokhu kufinyeleleke ikakhulu mayelana nokuqonda abafundi abasha futhi kuyisikhumbuzo eliyingqayizivele futhi enamandla kangako ukuthi ngisho umongo nemicimbi yomhlaba amazwi abasha zingaba nomthelela omkhulu.
Okufakiwe Anna - kungcono nje omunye Diaries eziningi izingane nentsha eziye zalondolozwa kusukela Kwesizwe. Abasikhumbuza izingane ukuthi banayo ilungelo lokuvota, ukuthi umbono wabo emhlabeni kubalulekile, ngakho-ke, kungaphezu imininingwane isikhathi kanye nendawo.
Kungani Anna akazange abe nesikhathi ukuqedela idayari yami
Ngo-1944, cishe ngemva kweminyaka emibili edlule umndeni Frank wangena ukufihla emsakazweni i-Dutch, okuyinto ukusakaza ukusuka eLondon, isicelo senziwa ukugcina Diaries phakathi nempi, ngoba kukhona ezibaluleke kakhulu eNetherlands abantu. "Lesi siphakamiso laphefumulelwa Anna, owayelalele uhlelo lomsakazo nomkhaya wakhe. Waqala ukucubungula ibhulogi yakho futhi ukuzivumelanisa inoveli, okusikisela ukuthi kungenzeka nikumemezele ngemva kwempi, lapho umkhaya wakubo usaba ukufihla. Noma kunjalo, ngezinye izikhathi bangabaza abalobi balo lokucabanga "- uthi Museum.
Ngo-May ngawo lowo nyaka, u-Anne ubhala encwadini yakhe yezenzakalo zansuku ikhanda kakade kuqedile, lapho empeleni yonke into ihamba kanjalo ngokushesha, futhi yena ophikayo ukuthi kungaba umuntu Ngalifunda okokuqala.
Ngeshwa, u-Anna waba nethuba ukuthuthukisa imibono yabo. Agasti 4, 1944 Anna nomkhaya wakhe, kanye nezinye izakhamuzi yokukhosela saboshwa amaGestapo - amaphoyisa amaNazi izimfihlakalo. Zonke labo ligcine wathumela e-Auschwitz - ekamu ukufa ePoland. Nokho, u-Anne nodadewabo Margot zagcina ekamu eBergen-Belsen lokuhlushwa eJalimane, omunye lapho bobabili. typhus ngo-1945.
Indlela ujike ungase umlando
imibhalo elisanda kutholakala abonisa ukuthi u-Otto Frank - Ubaba ka-Anne - wayelokhu exhumana baseMelika bezama ukuthola ama-visa ngenkathi yena nomkhaya wakhe ababecashe, kodwa imibhalo ezingase ugcine zonke zazinikezwa sekwephuzile.
Kwenzekani uma umndeni ka-Anna namanje wathola i-visa futhi wakwazi ukuya Melika? Cishe, igama layo ngu-wawungeke ube vu yasendlini. Kodwa kunganikeza kangaka ezweni lethu. Nakuba ngisho manje, sibonga ubuntu Anne futhi yakhe yezenzakalo zansuku zonke, singabona ukuthi libhujisiwe ngenxa sokubulawa kwabantu abayizigidi ezingu-6 - emhlabeni ilahlekelwe ngombono yayo, nobuciko kanye ezingaba khona.
Ukwelashwa imikhuhlane umdlezane? amakhambi Folk nezidakamizwa